ShweMinThar: 👐မလွှဲသာလို့ ခွဲခွာတဲ့အခါ👐
☘️Talent War! Talent War! Talent War! ဆိုပြီး ပါရမီထူး ကျွမ်းကျင်သူ ၀န်ထမ်းတွေကို လုပ်ငန်းတွေက အပြိုင်အဆိုင်လုနေကြတဲ့စစ်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီစစ်ကြီးနဲ့အတူ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ခဏခဏထွက်နေကြတာတွေ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေလည်း ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီး လက်ရှိအလုပ်ကနေ ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတချို့ကိုဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
☘️Be convinced you are ready to resign. အလုပ်ထွက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး သွားပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်မိမိ သေချာပါစေ။ ၀န်ထမ်းအမျိုးမျိုးက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ကနေထွက်သွားကြပါတယ်။ တချို့က လစာမတိုးလို့၊ ရာထူးမတိုးလို့ တချို့က သင်ယူလေ့လာစရာမရှိလို့၊ သင်ယူလေ့လာခွင့်မရှိလို့၊ တချို့က အသိအမှတ်ပြုမခံရလို့၊ အထက်အောက်ဆက်ဆံရေး၊ ဘေးတိုက်ဆက်ဆံရေးမကောင်းလို့၊ တချို့က လစာနဲ့ခံစားခွင့်ပိုကောင်းတဲ့၊ အခွင့်အလမ်းပိုသာတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ချင်လို့ လက်ရှိအလုပ်ကနေ ထွက်သွားကြတာပါ။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အလုပ်ထွက်မယ်လို့ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ အရင်စဉ်းစားပါ။ အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ အလုပ်ထွက်ဖို့ သေချာပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်တော့ မိမိစိတ်ကို ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မလုပ်မရှုပ်လုပ်နေတာထက်စာရင် မိမိဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
☘️Keep your decision to resign under wraps. အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သူတွေ အချိန်မတန်ခင်မသိအောင် သိုသိပ်ထားပါ။ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ သတင်းတစ်ခုပေါက်ကြားတာနဲ့ ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရော တဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့ မလိုအပ်ဘဲ ကြီးထွားသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိုသိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အသံကြောင့်ဖားသေတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံတွေနိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပုံစံနဲ့ နှုတ်ထွက်ခွင့် တင်ပြတဲ့အချိန်မျိုးမှသာ သက်ဆိုင်ရာ အကြီးပိုင်း စီမံခန့်ခွဲသူတွေ သိရှိအောင် လုပ်ပါ။
☘️Pow-wow with the boss, first. တကယ်တော့ အလုပ်ကထွက်တော့မယ် ဆိုရင် မိမိရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ အရင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ထွက်တော့မယ့်အကြောင်းအရာကို အခြားဝန်ထမ်းတွေသိပြီးမှ မိမိအထက် လူကြီးသိရတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထွက်မယ့် အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေ လုပ်ပေးနိုင်တာ မိမိရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ စာရေးသူ ပြည်တွင်းနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလုပ်စဉ်က နိုင်းငံခြားကုမ္ပဏီက လက်ရှိရနေတဲ့လစာထက် ၃ ဆခွဲကျော်လောက် လစာနဲ့ခံစားခွင့်တွေ ပိုပေးမယ် သူတို့ကုမ္ပဏီကိုလာခဲ့ပါဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ HR အခေါ်အဝေါ်အရဆို Head Hunting လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲလိုအခြေအနေကို စာရေးသူရဲ့ Head of Department (HOD) ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး စာရေးသူသွားချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ တယ်။ အဲတော့ HOD က သွားတော့မသွားစေချင်ဘူး။ ဒီအတိုင်း ပေးတော့မထွက်နိုင်ဘူး Management ကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်ဆိုပြီး Management ကိုပြောပြလိုက်တော့ Management က စာရေးသူကိုခေါ် တွေ့ပါလေရော။ ခေါ်တွေ့လိုက်တဲ့ Result အရ လုပ်ငန်းက မထွက်စေချင်ကြောင်း လက်ရှိရနေတဲ့ ရာထူး၊ လစာ၊ ခံစားခွင့်ထက် ၃ ဆင့်ပိုမြှင့်ပေးပါလေရော။ ဒါကြေင့်မို့ မိမိရဲ့သက်ဆိုင်ရာအထက်လူကြီးနဲ့ အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ မိမိကလည်း လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးပြုတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်၊ မိမိအထက်လူကြီးကလည်း ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သူဖြစ်ပါက တစုံတရာအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာတစ်ခုရှိတာက အခြားမလိုတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ Jealousy ကိုတော့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
☘️Ask how you can help. ဒီလိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပေမယ့် ဘာမှထူးခြားမလာဘူးဆိုရင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ အလုပ်ထွက်တော့မှာ ဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ရမလဲဆိုတာကို မေးပါ။ အလုပ်ထွက်ခွင့် ပြုတဲ့နေ့မတိုင်ခင်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတိတိကျကျ ထမ်းဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ထွက်စာတင်ပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေက သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်သလိုမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့နေ့မတိုင်ခင်အထိလစာပေးထားရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုအပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဒီလိုတာဝန်ကျေပွန်စိတ်အပြည့်အ၀နဲ့ ထွက်ခွင့်ပြုတဲ့နေ့ မတိုင်ခင်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ စာဖတ်သူရဲ့ Professional ဆန်တဲ့ အပြုအမူကို သက်သေထူလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။
☘️Ask foratestimonial or reference. စာဖတ်သူ လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့တဲ့အတောအတွင်းမှာ ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ထောက်ခံချက်တောင်းခံပါ။ ဒီထောက်ခံချက်တွေဟာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အခြားအလုပ်တစ်ခုခုကို လျှောက်တဲ့နေရာမှာ တစုံတရာအကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Theory အရတော့ ဒီလိုတောင်းရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မြန်မာပြည်အနေအထားအရ အလုပ်ထွက်မယ့် ၀န်ထမ်းကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ၀မ်းပန်းတသာနဲ့ ထောက်ခံချက် ပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ သမာသမတ်ကျတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ တချို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ထောက်ခံချက်မပေးကြကြောင်း မြင်တွေ့ကြား သိနေရတာဟာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
☘️Say Goodbyes. နှုတ်ထွက်ခွင့်မကျခင်တစ်ရက်အလိုလောက်မှာ မိမိရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်ပါ။ မလွှဲသာလို့ခွဲခွာရပေမယ့် ကတ္ထီပါလမ်းခွဲဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့တွေရှိပါတယ်။ ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းအထဲမှာရှိတဲ့တချို့သူတွေကို မကောင်းကြောင်းပြောတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မိမိထွက်တော့မှာ သေချာပြီဆိုရင် ကတ္ထီပါလမ်းခွဲဖြစ်တာကပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
ဖေါ်ပြခဲ့တာတွေအပြင်စာရေးသူအနေနဲ့ အကြံပေးလိုတာက အခြားအလုပ်ကို ပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းကို မကောင်းမပြောပါနဲ့။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ မိမိအပေါ်ကောင်းခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်သတိရပါ။ မလွှဲသာလို့ ခွဲခွာခဲ့ရပေမယ့် ကတ္ထီပါလမ်းခွဲနဲ့ပဲအဆုံးသတ်နိုင်ကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ်။
Ref; The Management Bible by Neil Flanagan & Jarvis Finger,
Posted by Alex Aung at 1:46 AM
"မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကျဆင်းမှုအတွက် ဘာလုပ်သင့်သလဲ"
လက်ဖက်စိုက် ပလောင်တောင်သူများရဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ
ဘယ်လိုလုပ်တာက ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျဖို့ အထိရောက်ဆုံးလဲ ???